ငြိမ်းအေးမှူ့ အစစ်အမှန်ကို ရှာတွေ့ သွားသူများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ငြိမ်းအေးမှူ့ အစစ်အမှန်ကို ရှာတွေ့ သွားသူများ
ငြိမ်းအေးမှူ့ အစစ်အမှန်ကို ရှာတွေ့ သွားသူများ
Posted by မမလေး on Oct 10, 2010 in News |2comments
Jennifer Lopez့ (Angelia Jolie)အဗုဒ္ဓဘာသာလို့ ဆိုလာကြပါတယ်.
အားကစားဝါသနာ ပါလို့ Premier Eleven sport journal ကို
ဖတ်နေရင်း မမျှော်လင့်ပဲ အရမ်း စိတ်ဝင်စား ဖို့ ကောင်းတဲ့ သတင်းလေး
တစ်ပုဒ်ကို တွေ့ လိုက်ရပါတယ်။
ပြီးတော့ ကိုယ့် ရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ အတွက် ရော၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖြစ်နေရတဲ့ ဘ၀ လေးကို လည်း အရမ်း ကျေနပ်မိပါတယ်။
ဖတ်လိုက်ရတော့သတင်းလေးကတော့.. အားကစားနယ်ပယ်မှာ လျှမ်းလျှမ်းတောက် အောင်မြင်နေသူတွေ နဲ့ အနုပညာ နယ်ပယ်
Hollywood မှာ ရေပန်းစားနေဆဲ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ
ထဲကို သက်ဝင်ယုံကြည်စွာ ကူးပြောင်း လာခဲ့ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သူတို့ အထဲမှာ ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတာက ပုရိသတို့ ရဲ့ အသည်းစွဲ . ညှို့ မင်းသမီးများဖြစ်ကြတဲ့ (Jennifer Lopez) ဂျနီဖာလိုပတ်ဇ် နဲ့ (Angelia
Jolie)အင်ဂျလီနာဂျိုလီ တို့ လို့ လက်ရှိ အောင်မြင်နေတဲ
့ထိပ်တန်းမင်းသမီးတွေကပါ ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ ဆိုလာကြပါတယ်.။ ဒီ သတင်းသာ
တကယ်မှန်ကန် ရင်တော့ အတိုင်းထက် အလွန်ပါပဲ ။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မင်းသမီး Jennifer Lopez ရဲ့ တည်ငြိမ်သောအလှ
ယနေ့ အချိန်အထိ ဆွဲဆောင်နေဆဲ Angelina Jolie
ဆယ်ကျော်သက်တို့ ရဲ့ မင်းသားချော Orlando Bloom
Eleven Journal ဆိုတာကလည်းမြန်မာပြည်မှာနာမည်ကြီးပါပဲ ။ ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ သတင်းအဖွဲ့ အစည်းတစ်ခုပါ ။ မဟုတ်မှန်တဲ့ သတင်းကိုတော့ လုပ်ကြံလီဆယ်
ပြီတော့ ဒီ သတင်း လေး ဟာ အားကစား ဂျာနယ် တစ်စောင်အဖို့ ဘယ်လို မှ ရောင်းအားတက် စရာမရှိပါဘူး ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်
အတွက်တော့ ဘယ်လိုမှ ပြောလို့ မပြနိုင်လောက်အောင်ကို ၀မ်းသာ ပိတီဖြစ်ရပါတယ်။
အဆိုပါ ဓာတ်ပုံ နှင့် စာသား များ မှာ Premier Eleven journal
(No5Vol 8 Page-21) မှ တဆင့် ကူးယူ ထားပါသည်။
ရုပ်ဝတ္တုတွေ လွန်စွာတိုးတက်နေတဲ့ အနောက်နိုင်ငံက ဒေါ်လာတွေ သန်းချီ ၀င်နေတဲ့ နာမည်ကျော် ပုဂ္ဂိုလ်များဟာ. ဘာဖြစ်လို့ များ ဗုဒ္ဓဘာသာကို
သက်ဝင်ယုံကြည်စွာကိုးကွယ်ကြတာလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းဟာလည်း ရင်ထဲမှာ
သူတို့ နေတဲ့ တိုင်းပြည် ။ သူတို့ ရဲ့ အရပ်ဒေသ ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ထွန်းကားတဲ့ ဒေသတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်တိုင်ကလည်း မွေးကတည်းက
ဖန်ဆင်းရှင် ၀ါဒ တွေ ကြားထဲမှာ ကြီးပြင်းလာခဲ့ရတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ မိဘ ဆွေမျိုးသားချင်း မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေ ထဲမှာလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ရှိနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီ ဘာသာ နဲ့ ကိုယ့်နဲ့ ဘယ်လိုမှ ပတ်သက်မှု့ မရှိနိုင်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က လူ
တစ်ယောက်ဟာ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာ ရှေးပဌာန်း
ဆက် ကြောင့် ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။
နောက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ဘာသာဟာ….အခြားသော ဘာသာများလို စီပွားရေး ဓန အင်အားလည်း မတောင့်တင်းလှ
ပါဘူး ။ ဒီ ဘာသာထဲကိုဝင်ရင် ဘယ်လို ထောက်ပံ့ မှူ့ တွေ ပေးမယ် ။ ဘယ်လို
အခွင့်အရေးတွေ ပေးမယ် ဆိုတဲ့ မက်လုံးတွေ လည်း မရှိပါဘူး။ ပေးလည်း
မပေးနိုင်သလို .. ဘယ်သူ့ ကိုမှ လည်း မပေး ပါဘူး။
စိတ်ဝင်စားရင်လေ့လာကြည့်ပါ။ စမ်းသပ်လုပ်ကြည့်ပါ။ တကယ်လက်တွေ့ လုပ်ကြည့်ပြီး စ်ိတ်အေးချမ်းသာမှု
့ကို တကယ်ရမှ ယုံကြည်သက်ဝင်ပါလို့ ဆိုတဲ့ တရားဂုဏ်တော် တွေနဲ့ အမှန်တကယ်
ပြည့်စုံ လို့ သာ သူတို့ တွေ က ဒီ ဘာသာကို ယုံကြည်လာတယ် လို့ ထင်ပါတယ်။
ဒီလို မျိုး စိတ်အေးချမ်းမှု့ ကလည်း ငွေတွေ ရွှေတွေ ပေးဝယ်လို့ မရ ၊ ဂုဏ်
ပကာသနတွေ နဲ့ လဲ ယူလို့ လည်း မရပါဘူး။ ဒါကြောင့် သူတို့ဗုဒ္ဓဘာသာ ကို
၀ိပသနာ တရားစခန်းတွေမှာ လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မဟုတ်တဲ့ ဘာသာခြားတွေ လာရောက်တရား အားထုတ်ကြပါတယ်။ တကယ် လက်တွေ
့ ကျင့်ကြံပြီးတော့ စိတ် ၏ ငြိမ်းချမ်းရာ အမှန်တကယ် တွေ့ တော့မှပဲ
ကိုယ့်ရဲ့ ဘာသာဝင် မဟုတ်ပေမဲ့သဘောထားကြီးမြတ်စွာ ကိုယ့်ရဲ့ ဝိပသနာ တရားတွေ ကို ဖြန့် ဝေ ပေးနိုင်တာ
ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာ အခြား ဘယ်ဘာသာမှ မရှိနိုင်ပါဘူး။
အခုမြင်တွေ့ နေရတဲ့ကမ္ဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာ .. တိုက်ဂါးဝုဒ် တို့ ကတော့ မိခင် က
ထိုင်းလူမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာ မို့ လို့သူကိုယ်တိုင်လည်း
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်တာမဆန်း ပေမဲ့ ဘက်ဂီယို တို့ လို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကတော့
အောင်မြင်မှု့ တွေ ကျရှုံး သွား ချိန်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ အေးငြိမ်းမှု
့ကို ပြသပေးတဲ့ တိဘက်လာမား ဘုန်းတော်ကြီးနဲ့ တွေ့ ရှိသွားလို့ဒီဘာသာကို
ဒါပေမဲ့ ကျန်တဲ့ အနုပညာ နယ်ပယ်က သူတွေကတော့ လက်ရှိအောင်မြင်မှု့ တွေ ရရှိဆဲ ဖြစ်နေတာတောင် ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ
့ငြိမ်းချမ်းမှု့ ကို စောစီးစွာ သိမြင် နားလည် လိုက်ကြတယ်လို
မွေးကတည်းက ကိုးကွယ် လာတဲ့ မိခင်ဘာသာ တစ်ခု ကို ပစ်ပယ် ပြီး အခြားဘာသာတစ်ခုကို ပြောင်းလဲ ကိုးကွယ်ဖို့ ဆိုတာ တကယ့်ကို
တကယ့်ကို ရင်ထဲကနှစ်နှစ်ကာကာယုံကြည်သက်ဝင်မှာသာ အခက်အခဲတွေကို ကျော်လွားနိုင်မှာပါ။
ဒီကိစ္စ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အီတလျံ ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါး ဖြစ်တဲ့ ဦးလောကနာထ ပြောကြားသွားတဲ့စကားလေးကတော့ …
မြန်မာ ဆိုတဲ့ လူမျိုးတွေဟာ အင်မတန်ကံကောင်းပါတယ်။ မွေးကတည်းက ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ ရင်ခွင်မှာကြီးပြင်းလာခဲ့ရတယ်။
တရားဟောပြော ညွန်ပြပေးမဲ့ သူတွေကလည်း အဆင်သင့် ပါပဲ ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ဖို့ ကို ဘယ်လောက်မှ အားမစိုက်ရပဲ အလွယ်တကူရရှိကြပါတယ်။
သူတို့ တွေဟာ မိဘ ချမ်းသာလို့သားသမီးလည်း ချမ်းသာ ပြီး …သူဌေးသား ကနေ အချိန်တန် သူဌေးဖြစ်သူတွေနဲ့ တူပါတယ် တဲ့။
အခြား လူမျိုး ၊ အခြား ဘာသာဝင်ကနေ ကူးပြောင်းပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဖြစ်လာဖို
့ကျတော့ အခက်အခဲတွေ ၊ အတားအဆီးတွေ မျိုးစုံကို ကျော်လွှားပြီးတော့မှပဲ
ဒါကြောင့် ဘာသာခြား ကနေ ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်လာတဲ့ သူကိုတော့ ပင်ပန်းကြီးစွာ ကြိုးစားရလို့ဆင်းရဲသား
ကနေသူဌေး ဖြစ်တဲ့သူ နဲ့ တူပါတယ် လို့ ဥပမာပေးသွားပါတယ်။
ဦးလောကနာထ တင်စားသွားတဲ့ ဥပမာ လေးဟာအတော့်ကို အဓိပ္ပာယ်ရှိလှပါတယ်။ ဆိုလိုရင်း ကိုလည်း သဘောပေါက်စေပါတယ်။
ဒီလို ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ တွေဟာ သူဌေးသား . သူဌေးသမီးလေးတွေပေါ့နော်။
မိရိုးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာ အဖြစ်ကနေ တကယ်သာ အားစိုက်လိုက်မယ် ဆိုရင် ဗုဒ္ဓဘာသာကောင်း တစ်ယောက်
(သူဌေးကြီး) ဖြစ်နိုင်ဖို့ အခွင့်အရေးတွေ အများကြီး ရှိတာပေ့ါနော်။
ဘယ်လိ်ု အခက်အခဲ အတားအဆီးမှလည်း မရှိပါဘူးနော်။
တကယ်လုပ်ရမှာကတော့ ကိုယ်ရဲ့ စိတ်ကို ဘာသာရေးထဲမှာ တကယ်နှစ်နှစ်ကာကာ ယုံကြည်ဖို့ ပါပဲ ။
ဒီလို ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ကြည့်ပြီး ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ် ပြန်ဆုံးမ မိပါတယ်။
သူများတွေကတောင် အခက်အခဲ တွေမျိုးစုံကို စွန့် စားကျော်လွှားပြီး
ဗုဒ္ဓဘာသာကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေချိန်မှာ ကျွန်တော်ကတော့ အပျင်းထူ
တစ်နေ့ တစ်နေ့အလုပ်က မအား လို့ . ဟို ကိစ္စ ဒီကိစ္စ ကြောင့် ဘုရားကို တောင် ပေါက်ဆိန်ပေါက်သလို ဦးသုံးကြိမ် ချပြီး တော့
အ်ိပ်လိုက်မိတဲ့နေ့ တွေများလှ ပါပြီ။
နောက်ပြီးတော့ . ကျွန်တော့် ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း မှတ်ပုံတင် ထဲမှာ သာ ဗုဒ္ဓဘာသာအမည်ခံ ပြီး တော့
ယောင်တောင်တောင် ဖြစ်နေသူတွေ ။ ဘုရားကိုတောင် တစ်လနေလို့ တစ်ကြိမ်မမြင်ဘူး ၊
မဖူးဘူးတဲ့ သူတွေကိုလည်း ဆုံးမ ပညာပေးချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော် ရန်ကုန်မှာရှိစဉ်က သင်္ကြန်တိုင်းလို လို ဘုန်းကြီးဝတ်ဖြစ်ပါတယ်။ တခါတော့
ငယ်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က သင်္ကြန်မှာ ရေပက်ခံထွက်ဖို့ လာဆွယ်ပါတယ်။
သင်္ကြန် မှာရေမကစား ပဲ ပဉ္ဖင်း တက်မယ့် အကြောင်းကိုလည်း ပြောလိုက်ရော.. ဒီသူငယ်ချင်းက ဘာပြောသလဲ ဆိုတော့..
မင်းက အဘိုးကြီးကျနေတာပဲ .. ဘုန်းကြီးဝတ် ၊ တရားစခန်း ၀င်တာ က မင်း အသက်ကြီးမှ
လုပ်လည်းရတယ်။ သင်္ကြန်လည် တာကတော့ အသက်ကြီးရင် လုပ်လို့ မရဘူးကွ လို
သူပုံစံ ကိုကြည့်ရတာ..အသက် ၈၀ ပြည့်မှ သေပါရစေလို့ သေမင်းနဲ့ စာချုပ်ချုပ်ထားတဲ့ ပုံစံ မျိုးပါပဲ ။
သူငယ်ချင်း အချင်းချင်း စ.နောက်ပြီးတော့ ပြောတလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပါ။
ကျွန်တော် ရင်အနာ ဆုံးကတော့ . တိုင်းတပါး ရောက်ပြီး တိုင်းတပါးသားနဲ့ လက်ထပ်
သွေးနှောပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့ မိခင် ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကျောခိုင်းပြီးတော့ တိထ္ထိ
ဖြစ်သွားတဲ့ သူတွေ ။ မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာပဲ ဘာသာခြားနဲ့ လက်ထပ်ပြီးတော့
ဘာသာပြောင်းသွားတဲ့ သူတွေကိုတော့ သူဌေးသား ဘ၀ကနေ လမ်းဘေး ရောက်သွားတဲ့
ဆင်းရဲ သားတွေလို့ ပဲ ဥပမာ ပေးလိုက်ချင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့လည်း ဒါတွေ ဟာ ကံ တရားနဲ့ လည်း ဆိုင်ပါတယ်။ ကံ ရှိလို့ ၊ ရှေးပဌာန်း ဆက်ရှိလို
့ဗုဒ္ဓဘာသာ ၀င်ဖြစ်လာပေမဲ့ ..ကံကုန်တော့လည်း သူ့ လမ်း သူသွားတာပဲပေါ့။
ကျွန်တော်တို့ ကတော့ လက်လှမ်းမိသလောက် ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဲ့ ရင်ခွင်ထဲက
အားလုံးကတော့ သဗ္ဗေသတ္တာ ကမ္မသကာ ပါပဲလေ။
Ref : Aung Pyae (facebook photo)
ဦးတော် … ဦးတော် လို့ ဆိုပြီး ဦးသုံးကြိမ် ချနေတဲ့ကလေး လေ်း
အခု ဒီ စာ လေးကို ဖတ်မိတဲ့ သူငယ်ချင်းတို့ လည် . ငါ ဟာ မိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဓဘာသာ လား။
တကယ့် ဗုဒ္ဓဘာသာ စစ်လား ဆိုတာကိုတော့ ကိုယ့် ဘာသာပြန်လည် ဆန်းစစ်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုရင်း
ငြိမ်းအေးမှူ့ အစစ်ကို ရှာတွေ့ နိုင်ကြပါစေ။
ဒီနေ၇ာမှာဗုဒ္ဓ္ဒ၇ဲ့အယူဝါဒကိုအထူးလေ့လာလာပြီးကျင့်ကြံကြတဲ့သူတွေနဲ့၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်မှတ်မှတ်သူတွေကြားမှာကွာခြားတဲ့အချက်တွေ၇ှိပါ တယ်။ အဓိကကတော့ဗုဒ္ဓကနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုကြောင်းကိုဘဲဟောပါတယ်။ သံသ၇ာမှာလည်ကြောင်းကိုမဟောပါ။ သံသ၇ာမှာကျင်လည်စဉ်ကာလ အတွင်းလိုက်နာသင့်သောအဆုံအမဆို့ကိုပြဆိုခဲ့သော်လည်း၊ အတိတ်အပါအ၀င်ပစ္စုပါန်ကာလမှာကိုယ်ပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်၇ဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ “ကမ္မ”၇ဲ့အပြုနဲ့အဖြစ်ကိုသာဟောပါတယ်။ အလိုအလျောက်ဖြစ်တာတို့၊ တန်ခိုးဣိဒ္ဓိပါတ်အ၇ာတို့။ God ဘု၇ားသခင်ဝါဒ၊ ၊ ဖန်တီးပြီးဟောတာ၊ စသည်တို့ကိုလုံးဝမဟောခဲ့တဲ့အပြင်၊ ကိုးကွယ်ဆီးကပ်ခြင်းတို့ကိုတားမြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အ၇ှိကိုအ၇ှိသာဟောပြီးမ၇ှိတာကိုအ၇ှိလုပ်မဟောပါ။ ဆုတောင်းလို့ဘာမှမဖြစ်မလာနိုင်ပါ။ ကိုယ်တိုင်ပြုမှ၇ပြီးကိုယ်လုပ်သမျှ၇ဲ့အကျိုးကိုသာခံစား၇ပါတယ်။ “အဘိဓမ္မာ”၇ဲ့အဓိပ္ပါယ်ကိုယ်၌ကိုက “ထူးကဲနက်နဲသောတ၇ား” လို့အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားပြီးနားလည်၇န်လွန်စွာခက်ခဲတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်ကျွတ်ထိုက်သူကိုသာဟောပါတယ်။ အကျင့်အကြံသာဖြစ်ပြီးဘာသာမဟုတ်ပါ။ လေ့လာလိုက်စားသူနှဲနောက်လိုက်မိ၇ိုးဖလာကြောင့်သာဘာသာအဖြစ်တည်၇ှိလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဖေါ်ပြခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓ၀ါဒကိုလိုက်နာကျင့်ကြံကြသူတွေ(Hollywood)တွေကိုကြည့်ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လို့ချက်ချင်းကောက်ချက်မချမိဘို့အေ၇းကြီးပါတယ်၊ မြန်မာနယ်စပ်ေ၇ာက်ပြောင်းခိုသူတိုင်း၇င်းသားတွေ၇ဲ့ဘ၀ကိုစိတ်ဝင်စားပြီးအားပေးကူညီနေတဲ့ Angelina Jolie ဟာဗုဒ္ဓအယူ၇ှိသူဆိုတာကိုအ၇င်ကကြားဘူးပေမဲ့၊ အခန်းအနားတခုမှာသူဟာchurch ကိုသွားနေဆဲပါဆိုတာကိုဖွင့်ဟာပြောဘူးသွားတာကိုကြည့်၇င်သူ့ကိုယ်သူဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပါလို့မပြောနိုင်ကြောင်းပါ။ ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓ၇ဲ့အယူဝါဒကိုလိုက်စာပြီးကျင့်ကြံနေသူမို့ “ဗုဒ္ဓအယူဝါဒီ” လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ထိုနည်းတူဘဲအခြား celebrity နဲ့ business tycoons တွေက စစ်မှန်တဲ့အေးငြိမ်းမှု၇ှိတဲ့ Buddhism ကိုလေ့လာလိုက်စားကြသူတိုင်းလဲဒီလိုဘဲဆိုတာနားလည်ကြဘို့လိုပါတယ်။ တကယ်တော့ ဗုဒ္ဓအယူဝါဒဟာ ကလလေ၇ကြည်သန္ဓေတည်တဲ့အချိန်ကစပြီး၊ အို၊နာ၊သေဘေးဖြစ်တဲ့ (ဇာတိ၊ဇ၇ာ၊ဗျာဓိ၊မ၇ဏ)ဆိုတဲ့သတ္တ၀ါအားလုံးတို့၇ဲ့မလွဲမသွေဖြစ်ကြ၇မဲ့ပ၇မတ်ဖြစ်ပျက်တ၇ားတွေ၇ဲ့စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ပျက်မှုတွေကိုသိပ္ပံနည်းအကျဆုံးဖြေ၇ှင်းပြဆိုထားတဲ့တ၇ားဖြစ်ပါတယ်။ သိပ္ပံနည်းကျလွန်းတဲ့ဝိဇ္ဇာပညာဆို၇င်မမှားပါဘူး။ ဒီတ၇ားကိုအ၇ှိကိုအ၇ှိတိုင်းကာလသုံပါးကိုအသင်္ချေနဲ့ချီပြီးဟောနိုင်သောလူသား၇ယ်လို့လောကမှာတစ်ဦးတည်း၇ှိလို့ “မဟာလူသား”လို့ဆိုနိုင်ကြောင်းပါ။
ဗုဒ္ဓ၇ဲ့ဖေါ်ပြခဲ့တဲ့သက်၇ှိတိုင်းမလွဲမသွေဖြတ်သန်း၇မဲ့ဇာတိ၊ဇ၇ာ၊ဗျာဓိ၊မ၇ဏဆိုတဲ့ဒုက္ခအားလုံး၇ဲ့ချုပ်၇ာဖြစ်တဲ့ “နိဗ္ဗာန်”ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့နည်း (၈)သွယ်ကိုစာေ၇းသူကမှတ်သား၇လွယ်အောင်လင်္ကာစပ်ထားတာလက်ဆောင်ပါးပါ၇စေ။
မြင် – ကောင်းစွာမြင်ခြင်း
ကြံ – ကောင်းစွာကြံခြင်း
ဆို – ကောင်းစွာဆိုခြင်း
ပြု – ကောင်းစွာပြုခြင်း
သက်မွေးမှု – ကောင်းစွာသက်မွေးမှုပြုခြင်း
အားထုတ် – ကောင်းစွာအားထုတ်ခြင်း
အောက်မေ့ – ကောင်းစွာအောက်မေ့ခြင်း
တည်ကြည်မွေ့ – ကောင်းစွာတည်ကြည်ခြင်း
ဒီပိုစ့်လေး ဖတ်ရတာ ကြည်နူးစရာကောင်းလိုက်တာဗျာ… ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက် ဖြစ်ရတာ ဂုဏ်ယူမိပါတယ်…